Macallinka Leeds United oo ka sarreeya kan Man United…. (10-ka Tababare ee ugu Mushaharka badan Premier League oo la shaaciyay) – Gool FM
Macallinka Leeds United oo ka sarreeya kan Man United…. (10-ka Tababare ee ugu Mushaharka badan Premier League oo la shaaciyay)
(Yurub) 16 Sebt 2020. Waxaa la shaaciyey tobanka Tababare ee mushaharka ugu badan ka qaata haatan horyaalka Premier League.
Macallinka ku cusub horyaalka Premier League ee hoggaamiya kooxda Leeds United, Marcelo Bielsa ayaa ka sarreeya Tababaraha Man United ee Ole Gunnar Solskjær.
Tababaraha Kooxda kubadda cagta Manchester City ee Pep Guardiola ayaa ah macallinka ugu mushaharka badan horyaalka Premier League waqtigan, waxaana uu ka qaataa kooxda ka arrimisa garoonka Etihad adduun dhan 20 milyan oo gini.
Kaalinta labaad waxaa ku wada jira labada tababare ee Jose Mourinho oo hoggaamiya Tottenham iyo macallin Jurgen Klopp oo hor kaca kooxda Liverpool, kuwaasoo kooxohooda ka qaata lacag dhan 15 milyan oo gini.
Waxaa kaalinta afaraad ka soo muuqatay macallinka qabiirka ah ee Carlo Ancelotti ee hoggaamiya Everton, kaasoo isna jeebka ku shubta 11.5 milyan oo gini.
Hoggaamiyaha Kooxda Leicester City ee Brendan Rodgers oo 10 milyan oo gini ka qaata kooxda dawacooyinka lagu naynaaso ayaa ku jira kaalinta shanaad ee tababareyaasha ugu mushaharka badan Premier League.
Macallinka kooxda Leeds United ee Marcelo Bielsa oo qaata 8 milyan oo gini ayaa ka sarreeya Tababaraha Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær oo heshiiskiisa garoonka Old Trafford ku hela 7.5 milyan oo gini.
Kaalinta siddeedaad waxaa ku jira hoggaamiyaha Kooxda Southampton ee Ralph Hasenhüttl, kaasoo isna hela 6 milyan oo gini.
Kooxda Chelsea macallinkeeda Frank Lampard ayaa kaalinta sagaalaad ka soo galay Tababareyaasha ugu mushaharka badan Premier League.
Tababaraha kooxda Arsenal ee Mikel Arteta ayaa isaguna kaalinta ugu hooseysa ka hoggaaminaya 10-ka macallin ee ugu mushaharka badan horyaalka Premier League.